Ama-Gloves Mitts Massage Ithuluzi Lokugeza Abenzi & Abahlinzeki | China Gloves Mitts Massage Ukugeza Ithuluzi Factory
Ikati le-Remover Brush
I-1.Lebhulashi lokususa izinwele lekati lisusa izinwele ezifile futhi lichithe izinwele zezilwane ezifuywayo zigcina isilwane sakho sizilungise kahle.
I-2.Ibhulashi lokususa izinwele lekati lenziwe ngenjoloba ethambile enedizayini encane, kusetshenziswa isimiso se-electrostatic ukumunca izinwele.
3.Ingasetshenziselwa ukubhucunga izilwane ezifuywayo nezilwane ezifuywayo zizoqala ukukhululeka ngaphansi kokunyakaza kwebhulashi lezinwele lekati.
I-4.Ibhulashi ilungele bonke osayizi bezinja namakati. Kuyinto elula yokuhlinzeka isilwane futhi kulula ukuyisebenzisa, gcina igumbi lakho lihlanzekile futhi lifuyile liphilile.
Inja yokugeza Massage
I-Dog Bathing Massage Brush inezikhonkwane zenjoloba ezithambile, ingaheha ngaso leso sikhathi futhi ichithe uboya engubeni yesilwane sakho ngenkathi isilwane sakho sibhucungwa noma sigezwa. Isebenza kahle ezinjeni nasemakati enawo wonke amasayizi nezinhlobo zezinwele!
Amathiphu wokubamba induduzo enerabha ohlangothini lwenja yokugeza ibhulashi ikunikeza ukulawula okuhle noma ibhulashi limanzi.ibhulashi lingasiza ekuqedeni imiphimbo kanye nezinkalaka zesikhumba esifile, lenze ijazi lihlanzeke futhi libe nempilo.
Ngemuva kokuxubha isilwane sakho, mane nje uhlambe ibhulashi lokuhlikihla lenja ngamanzi. Ngemuva kwalokho isilungele ukusetshenziswa ngokuzayo.
Inja Shampoo Yokuhlanza Ibhulashi
1.Le Brush Shampoo Yokuhlanza Ibhulashi kulula kakhulu ukuyibamba futhi ilungele abanikazi abanikeza ukugeza kwezilwane ezifuywayo ngokwabo.
Le bhulashi lokuhlanza inja linenqwaba ethambile, ngeke ilimaze uboya nesikhumba futhi ungasusa izinwele zesikhumba sakho kalula.
3.Ngokulondolozwa kwendilinga okuncane, ngeke kudingeke ukuthi welule i-shampoo nensipho ngenkathi ugeza isilwane sakho. Le bhulashi ingasetshenziselwa ukugeza nokuhlikihla izinja.
Ukuxubha nje isilwane sakho kancane, ibhulashi le-shampoo yokulungisa inja lingenza amagwebu acebile ukuvumela inja ihlanzeke kunamanye amabhulashi ajwayelekile.
Inja Bath Shower Brush
1. Leli bhulashi lokugeza esindayo lezinja elisindayo lisusa kalula izinwele ezivulekile kanye ne-lint ngaphandle kokubamba izingxube futhi kubangele ukungakhululeki enjeni yakho. Izindwangu zenjoloba eziguquguqukayo zisebenza njengomazibuthe wokungcola, uthuli nezinwele ezixegayo.
2. Le bhulashi lokugeza inja linezinyo eliyindilinga, Alilimazi isikhumba senja.
3. Ibhulashi le-Dog Bath Shower lingasetshenziselwa ukubhucunga izilwane ezifuywayo, nezilwane ezifuywayo zizoqala ukukhululeka ngaphansi kokunyakaza kwebhulashi.
4. I-non-slip side grip ye-innovative, ungaqinisa ukubamba lapho uhlikihla inja yakho, noma ebhavini.
Inja Yokugeza Inja
I-1.Lesi sitsha sokugeza inja sihlanganisa ibhulashi lokugeza namanzi sprayer.Akulona kuphela elingageza isilwane, kodwa futhi ne-massage.Ikufana nokunikeza inja yakho isipiliyoni se-spa esincane.
2.Professional inja ukugeza eshaweni sprayer, eyingqayizivele ukuma contoured eklanyelwe ukugeza izinja zabo bonke osayizi nezinhlobo.
3.Two esikhiphekayo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ukufaka futhi ususe kalula endlini noma ngaphandle.
Isifutho sesifutho senja sigeza kakhulu ukusetshenziswa kwamanzi ne-shampoo uma kuqhathaniswa nezindlela zokugeza zendabuko.
Ukuhlanzwa Kwezinwele Ezifuywayo Ne-Massage Brush
I-1.Pet Hair Grooming Bathing And Massage Brush ingasetshenziswa yomabili noma eyomile.Ingasetshenziswa hhayi nje njengebhulashi lokugeza ukuhlanza izinwele zezilwane, kepha futhi njengethuluzi lokubhucungwa izinhloso ezimbili.
I-2.Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-TPE, ukuthamba, ukuqina okuphezulu futhi okungeyona i-toxic.With design ecabangelayo, kulula ukuyibamba futhi kulula ukuyisebenzisa.
Amazinyo ama-3.Soft amade angahlanza ngokujulile futhi anakekele isikhumba, angasusa izinwele ezikhululekile nokungcola ngobumnene, akhuphule ukujikeleza kwegazi futhi ashiye ijazi lesilwane sakho lithambile futhi licwebezela.
4.Amazinyo ayisikwele ngaphezulu angakwazi ukubhucunga nokuhlanza ubuso bezilwane ezifuywayo, izidladla njalonjalo.